जलविद्युतमा ११ अर्बको साधारण सेयर आउँदै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जलविद्युतमा ११ अर्बको साधारण सेयर आउँदै
पुष २३, २०७४ 3749 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
६ जलविद्युत् कम्पनीले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको साधारण सेयर (इनिसियल पब्लिक अफरिङ–आइपिओ) जारी गर्ने अन्तिम तयारी गरेका छन् । सबै कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) बाट निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाइसकेका हुन् ।
सर्वसाधारणका लागि छुट्ट्याइएको सेयर जारी गर्न सबै कम्पनीले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक समेत नियुक्त गरेका छन् । सर्वसाधारणबाट ११ अर्ब ४४ करोड ५१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ उठाउन ९ करोड ८० लाख ८६ हजार ७ सय ७५ कित्ता सेयर जारी हुँदैछ ।
बोर्डका अनुसार राधी विद्युत्, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, सान्जेन जलविद्युत्, रसुवागढी हाइड्रो पावर र कालिका पावर कम्पनीले साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्नेछन् । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) ले भने ४० लाख ८१ हजार कित्ता एफपिओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ) जारी गर्दैछ ।
बिपिसीले प्रतिकित्ता ५ सय १ रुपैयाँ मूल्य राखेर एफपिओ जारी गर्दैछ । उता अन्य ५ कम्पनीको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य भने सय रुपैयाँ नै हुनेछ । राधीले ६ लाख १५ हजार, पञ्चकन्याले ९९ लाख, सान्जेनले २ करोड ७३ लाख ७५ हजार, रसुागढीले ५ करोड १३ लाख १५ हजार ७ सय ५० र कालिकाले ४८ लाख कित्ता सेयर जारी गर्नेछन् ।
राधीले नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ, पञ्चकन्याले सनराइज क्यापिटल र नबिल तथा सान्जेनले नागरिक लगानी कोषलाई सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक तोकेका छन् । यसैगरी, रसुवागढीले सिद्धार्थ, एनआइबिएल, ग्लोबल आइएमइ र सनराइज क्यापिटल तथा कालिका पावरले काठमाडौं र ग्लोबल आइएमइलाई नियुक्त गरेका छन् ।